Afar Cunsur oo Loogu Talo Galay Kiiska Xad-gudubka Caafimaad Ee Imaaraadka | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Afar Meelood oo Loogu Talagalay Xaalad Caddeyn Caafimaad oo ka dhacday UAE
Leave a Comment	/ blog, Difaaca Dambiyada, shirkadaha sharciga / By Sarah
Haddii aad uur leedahay, waxaa laga yaabaa inaad haysatid xayawaan si aad u qaadato daaweyn caafimaad.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xubno muhiim ah oo ku saabsan mala-awaalka aad u baahan tahay in aad caddeyso inaad u gudbin karto dacwadaada ama dhakhtarka. Waa khibrad caafimaad oo khibrad leh ama qareen ah markaad heysana waxaad cadeeyneysaa waxyaabo.
Xiriirka arimaha bulshada
Towfiiq waa in la ogaadaa xiriirka xirfadlaha ah ee ka jira mihnadlaha xirfadlaha, oo bukaanka ah, oo bukaanku adeegsanayo.
Xaaladda xiriirka lamaanaha ee xiriirka la leh, waxaa loola jeedaa in dhakhtarkaaga caafimaadku uu yahay mid aad u wanaagsan oo aad u baahantahay.
Daawo ahaan waxaad u baahan tahay daryeel caafimaad si aad u ogaatid ama u sheegto daaweyntaada.
Proоf ee Neglіgént Cae
Ka dib markii la dhiso dostogar-ka, waxaad u baahan tahay inaad muujisid ficilada aad u baahan tahay si aad u ogaato heerarka daaweynta caafimaadka.
Taas ayaa ah in dhakhtarkaagu aanu raacin dammaanadda caadiga ah ee dadka kale ee leh tababbarka qadiyada ah ee la rabo in aan la mid aheyn.
Markaa waxaad u maleyneysaa in aad tahay qof kale oo ku takhasusay xirfadihiisa ama goob kasta oo ka mid ah farsamooyinka shaqada ee tayadaada ah ee heerkulku yahay in la raaco marka loo eego marka ujeedadu tahay.
Markaa adoo adeegsanaya adoo adeegsanaya adoo adeegsanaaya, waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto shaqsiyaadka xirfadlayaasha ah ee xirfadlayaasha ah. Qofka eedaysanuhu wuxuu u maleynayaa inuu yahay midkani sida ugu dhaqsiyaha badan uu ula dhaqmo niglinsgene.
Khabiirku wuxuu u adeegsanayaa heerarka caadiga ah ee ku saabsan sida aad u tilmaanto sida uu ufilan yahay inaad u noolaato si aad u hesho tayadaada markaad bixiso khibradaada.
Marqaati-bixiyuhu wuxuu bixiyaa wax-qabad khaas ah oo ku saabsan sida ay u kala duwanyihiin sida ay ula dhaqmayaan heerarka bulshada.
Xidhiidhka Beelaha Neegleyn iyo Injuru
Ons уоu hаvе ujeedada aad u muujisid, waxaad u muujinaysaa inaad u muujinayso asxaabtiisa, iyo inaad ka warqabto, inaad ubaahan tahay inaad wax u yeerto.
You mustt bere able to the rroge that the condition of the illness is caused by the care of the physician's care and the fact that he or she is the cause of another.
Dhacdadani waxay ku dhacaysaa dhaawaca
Talaabada ugu dambeysa ee keenaysa guul miisaaman oo ku salaysan guul darradu waa wax aan loo baahneyn oo aan la haynin wax ka mid ah daaweynta cudurrada. Si ressovert u ahmushoow, waxaad u baahan tahay inaad udheesho macaamiisha iyo nnn-mоnеtga u daamaaawe sida soo socota ee ka mid ah munaasabada ah ee rrosfeeqogsnaal ah ee niglggga.
Daawadaada caafimaad waxaa laga yaabaa in lagaa qaado, ama aad xanuunsato, ama aad qabatid xanuun maskaxeed ama raaxo xanuun leh.
Markaa Dubai waa in aad ka heshaa daaweyn caafimaad oo aad u wanaagsan, markaa waa in aad si xeeladeysan u qadataa. Dhibaatooyinkaas, kuwaas oo si khaas ah loo yareeyo khaas ahaan ama si aan fiicnayn, waa laba luuqadood oo kala duwan oo ka mid ah astaamaha asalka ah.
Cudurkaan waa mid aan ku habooneyn in aad adigu raadsato dalabaad caafimaad oo khatar ah.
Proоf "Waxaa ka soo jeeda Proerndheessee oo ka mid ah Evansdheere."
Ka hor inta aanad dhicin wax caddayn ah waa inaad markhaati ka noqotaa. Maqaalkani wuxuu muujinayaa in badan oo ka mid ah looma baahna in aad ka fekerto oo aad u aragto dhakhtarkaaga.
You mustt wuxuu ku qancin karaa "in laga yaabo in uu ka badan yahay" xaqiiqda dhabta ah ee aad u baahan tahay inaad uuraysato takhtarka dhakhtarka ee niglіgénse.
Waa inaad xaqiiqda iyo xaqiiqda aad xaqiiqda u leedahay inaad ka hesho 51 khudbadaada, halka ay fursad u leeyihiin inay been abuuraan xNUMX.
Exrerіensed Médіsal Mаlrrastіse Lаwuee
Dhakhaatiirta iyo xirfadlayaashu waxay la shaqeeyaan xirfadlayaashii iyo xirfadlayaashii hore ee tayada leh.
Xaqiiqo ahaan, daaweyntu waa mid aad u xun, sababtoo ah waa daaweyn caafimaad oo ku haboon caafimaadka nadaafadda.
Haddii uou kufaraxsan tahay inaad codsato inaad ka hortagto dhakhtar, waxaad si dhakhso ah u dhaqantaa. Wixii ku saabsan saddexda bilood ee ugu dambeysa ee aad u baahan tahay, waxaad u maleyneysaa in aad ka walwalsan tahay.
Xeerka Firfircoonida Dubai ee khabiir ku takhasusay arrimaha khibradda leh ee khibrada u leh khibrada daryeelka caafimaadka ee ku xeeldheer xayawaanka.
Waad ogtahay inaad u baahan tahay si aad u heshid mawduucyada aad uqalantay ee aad uqalantay.